मोबाइल फोन रिकभरी: कसरी मोबाइल फोन फाइलहरू पुन: प्राप्त गर्न
मद्दत गर्नुहोस्! मोबाइल फोन रिकभरी आवश्यक!
नमस्कार, म अर्को एक मोबाइल फोनबाट डाटा स्थानान्तरणका थियो, र झुक्किएर गलत कार्ड फाइलहरू हटाइयो। मेरो संगीत, फोटो, भिडियो र सबै कागजात गएका छन्। फिर्ता म तिनीहरूलाई कसरी प्राप्त गर्न सक्छ? कुनै पनि मद्दत सराहना हुनेछ। के गर्ने?
आफ्नो टाउको मा पहिलो कुरा: तुरुन्तै स्थानान्तरणका रोक्नुहोस् र कुनै पनि नयाँ डाटा कार्ड हालिदिए छैन। बस किनभने हराएका डाटा को दर कम हुनेछ जुन नयाँ फाइलहरू, द्वारा अधिलेखन हुनेछ, यसको आफ्नै को ठाउँमा यो राख्न मोबाइल फोन डाटा रिकभरी ।
आजकल, अधिक र अधिक शक्तिशाली मोबाइल फोन संग, मान्छे बढी समय पुस्तकहरू पढेर, स्मार्ट मोबाइल यस्तो आनन्द चलचित्र र संगीत रूपमा, मनोरञ्जन लागि फोन संग खर्च गर्न तस्बिरहरू वा भिडियो रेकर्ड बनाउन वा कागजातहरू काम सम्हाल्न गर्छन। तर, मोबाइल उपकरणहरूमा काम गर्न रूपमा कम्प्युटर मा रूपमा सुविधाजनक छ, र यो लापरवाह सञ्चालन गरेर फाइलहरू मेटाउने रूपमा गल्ती गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसैले ती महत्त्वपूर्ण फाइलहरू लागि नियमित ब्याकअप गर्न सम्झना। प्रकोपबाट आएको र ब्याकअप बिना त के गर्ने? पक्कै, एक मोबाइल उपकरण रिकभरी तुरून्त आवश्यक छ।
भाग 1: सर्वश्रेष्ठ मोबाइल फोन रिकभरी सफ्टवेयर प्राप्त
भाग 2: कसरी मोबाइल फोन फाइलहरू पुन: प्राप्त गर्न
मोबाइल रिकभरी रूपमा, त्यहाँ बजार मा धेरै छन् र ती सबै भन्दा साँच्चै मदत गर्न सक्छ मोबाइल फोन बाट हराएका फाइलहरू पुन: प्राप्त । त्यसपछि हामी तिनीहरूलाई देखि एक राम्रो एक चयन गर्नुपर्छ र एउटा सरल काम छैन। तपाईं लामो समय को लागि आफ्नो मोबाइल फोन कार्ड प्रयोग भने, त्यहाँ फाइलहरू लाखौं भण्डारण गरिएको हुनुपर्छ। तपाईंले तिनीहरूलाई बीच चाहनुहुन्छ कसरी पाउन? मूल फाइल नाम चाँडै र सही लक्ष्य फाइलहरू फेला पार्न सक्षम, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। तर, सबै मोबाइल रिकभरी सफ्टवेयर स्क्यानिङ गर्दा तिनीहरूलाई अधिकांश फाइल पुन: नामकरण, यो समर्थन गर्दछ। Wondershare डाटा रिकभरी (Win10 लागि उपलब्ध) मूल फाइल नाम फाइलहरू पुन: प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, र यो संगीत, भिडियो, फोटो र अन्य कागजात, साथै को रिकभरी समर्थन म्याकको लागि Wondershare डाटा रिकभरी (मैवरिक्स उपयुक्त)। ती दुवै 100% सुरक्षित र प्रभावकारी छन्!
सर्वश्रेष्ठ फोन रिकभरी सफ्टवेयर
सुरक्षित र पूर्ण प्रभावकारी कुनै पनि भण्डारण उपकरणबाट हराएका वा मेटिएको फाइल, फोटो, अडियो, संगीत, इमेल रिकभर।
रीसायकल बिन, हार्ड ड्राइभ, मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, डिजिटल क्यामेरा र कैमकोर्डर डेटा पुन: समर्थन गर्दछ।
विभिन्न परिस्थिति अन्तर्गत अचानक मेटाउने, ढाँचा, हार्ड ड्राइभ भ्रष्टाचार, भाइरस आक्रमण, प्रणाली दुर्घटना लागि डाटा रिकभर गर्न समर्थन गर्दछ।
रिकभरी अघि पूर्वावलोकन तपाईं एक छनौट रिकभरी गर्न अनुमति दिन्छ।
समर्थित ओएस: विन्डोज 10/8/7 / XP / Vista, म्याक ओएस एक्स (म्याक ओएस एक्स 10.6, 10.7 र 10.8, 10.9, 10,10 योसेमाइट, एल capitan, सियरा) iMac, मैकबुक, Mac मा प्रो आदि
डाउनलोड Windows संस्करण डाउनलोड म्याक संस्करण
3981454 मानिसहरूले यसलाई डाउनलोड गरेका छन्
Wondershare एसडी कार्ड डाटा रिकभरी यस्तो ब्ल्याकबेरी, नोकिया, एन्ड्रोइड फोन, सैमसंग, HTC, र थप, कुनै कुरा डाटा कारण नष्ट रूपमा ब्रान्ड को विभिन्न प्रकार देखि मोबाइल फोन डाटा रिकभरी प्रदर्शन गर्न सक्छन्:
मोबाइल फोन कार्ड बाट गल्ति मेटिएको फाइल
ढाँचामा मोबाइल फोन कार्ड
मोबाइल फोन कार्ड दूषित वा दुर्गम भयो
चरण 1 कम्प्युटर आफ्नो मोबाइल फोन कार्ड जडान गर्नुहोस् र तपाईँको कार्ड पत्ता सकिन्छ कि निश्चित गर्नुहोस्। मोबाइल फोन रिकभरी सफ्टवेयर सुरु र तपाईंले रिकभर गर्न चाहनुहुन्छ फाइलहरू चयन गर्नुहोस्।
चरण2बाह्य हटाउन सकिने यन्त्र आफ्नो एसडी कार्ड फोन चयन गर्नुहोस्। मोबाइल फोन फाइलहरू पुन: प्राप्त गर्न बटन सुरु क्लिक गर्नुहोस्।
चरण3को खोज्दै, पूर्वावलोकन पछि र भने आफ्नो चाहन्थे फाइलहरू फेला पुष्टि गर्नुहोस्।
एसडी कार्ड रिकभरी सफ्टवेयर छिटो स्क्यान सुरु हुनेछ। यसलाई पूरा गरेपछि, तपाईं बस बरामद फाइलहरू पूर्वावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो फाइलहरू फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, दीप स्क्यान जानुहोस्।
डीप स्क्यान संग, यो देखि Moblie फोन SD कार्ड थप फाइलहरू खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई थप समय लाग्नेछ। गहिरो स्क्यान पूरा गरेपछि, तपाईं देखि मोबाइल फोन SD कार्ड ठीक सबै फाइलहरू पूर्वावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, विशिष्ट नाम गरेर फाइलहरू फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ।
चरण4आफ्नो लक्ष्य फाइलहरू जाँच गर्नुहोस् र पुन: प्राप्त गर्न थाल्छन्।
नोट: फेरि कार्ड मा बरामद डाटा बचत नगर्नुहोस्। यस्तो कम्प्युटर वा अन्य बाह्य डिस्क, सुरक्षा विचार लागि रूपमा यसको लागि अर्को स्थान पाउन।
मोबाइल फोन रिकभरी
मोबाइल डाटा रिकभरी सफ्टवेयर +
सेल फोन फोटो पुन:
शीर्ष 10 सेल फोन डाटा रिकभरी सफ्टवेयर
एन्ड्रोइड फोटो पुन:
विन्डोज फोन7डाटा रिकभरी
Nokia डाटा रिकभरी +
Lumia भिडियो रिकभर
नोकिया N8 / N9 फाइलहरू पुन: प्राप्त
Lumia 920 फारम फोटो रिकभर
फोटो फारम Nokia 5800 रिकभर
Nokia N97 फाइलहरू पुन: प्राप्त
ब्ल्याकबेरी डाटा रिकभरी +
ब्ल्याकबेरी फोन फोटो पुन:
ब्ल्याकबेरी बोल्ड फोटो रिकभर
ब्ल्याकबेरी टर्च फोटो रिकभर
ब्ल्याकबेरी वक्र फोटो रिकभर
HTC डाटा रिकभरी +
HTC इच्छा डाटा रिकभरी
HTC अनुभूति डाटा रिकभरी
HTC 8X डाटा रिकभरी
HTC रिजोन्ड Name डाटा रिकभरी
HTC अतुल्य डाटा रिकभरी
HTC प्रेरित डाटा रिकभरी
HTC Wildfire डाटा रिकभरी
HTC यूरो 3D डाटा रिकभरी
एलजी मोबाइल फोन रिकभरी +
एलजी एस्टीम फोटो पुन:
एलजी नेक्सस4डाटा रिकभरी
एलजी अप्टिमस फोटो पुन:
एलजी मार्की फोटो पुन:
एलजी Thrill फोटो पुन:
मोटोरोला मोबाइल फोन रिकभरी +
Motorola Razr डाटा रिकभरी
मोटोरोला फोटोन फोटो पुन:
Motorola ड्रोइड बायोनिक फोटो पुन:
Motorola ड्रोइड डाटा रिकभरी
मोटोरोला अवहेलना फोटो पुन:
सोनी मोबाइल फोन रिकभरी +
सोनी मोबाइल फोन रिकभरी
गोली डाटा रिकभरी +
ब्ल्याकबेरी प्लेबुक फोटो पुन:
नेक्सस7डाटा रिकभरी
मोटोरोला Xoom फोटो पुन:
एलजी अप्टिमस तस्बिर र भिडियोहरू कसरी पुन: प्राप्त गर्न
के तपाईं कहिल्यै एलजी अप्टिमस फाइलहरू मेटिएको छ, तर तपाईंले पछि तिनीहरूलाई फिर्ता गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईं के भने, तपाईँले दायाँ ठाउँमा हुनुहुन्छ। यो पुस्तिका तपाईं तिनीहरूलाई कसरी रिकभर गर्न देखाउँछ। ...
कसरी HTC 8X / 8S देखि हराएको वा मेटिएको डाटा पुन: प्राप्त गर्न
यस लेखमा नोकिया वा HTC देखि हराएका वा HTC 8X / 8S देखि डाटा मेटिएको वा अरूलाई विन्डोज फोन पुन: प्राप्त गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका परिचय। ...
मोटोरोला Xoom मेटिएको फोटो कसरी पुन: प्राप्त गर्न
म मोटोरोला Xoom ट्याब्लेट मेमोरी कार्ड बाट मेटिएको फोटो रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ? निश्चित, तपाईं गुणस्तर हानि शून्य संग, यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। समाधान को लागि विवरण प्राप्त गर्न मा पढ्नुहोस्। ...
नेक्सस7डाटा रिकभरी: नेक्सस7फोटोहरू / आसानी संग भिडियो / संगीत पुन: प्राप्त
तपाईं गल्ति तपाईंको नेक्सस7देखि केही महत्त्वपूर्ण फोटो वा अन्य फाइलहरू मेटिएको भने, तपाईंले केही चरणमा संग नेक्सस7देखि डाटा रिकभर गर्न यो लेख पढ्न सक्नुहुन्छ। ...
सोनी Xperia फोटोहरू कसरी पुन: प्राप्त गर्न
यस लेखमा सजिलो संग3चरणमा फोटो, भिडियो र अडियो सोनी Xperia फोटोहरू हटाइयो ठीक कसरी रिकभर गर्न बताउन रहेको छ। ...
कसरी मोटोरोला अवहेलना बाट मेटिएको तस्वीर पुन: प्राप्त गर्न
आफ्नो मोटोरोला अवहेलना प्लस वा मोटोरोला अवहेलना मिनी बाट मेटिएको तस्वीर ठीक गर्न आवश्यक छ? अहिले चिन्तित छोड। तपाईं तिनीहरूलाई फिर्ता प्राप्त गर्न राम्रो मौका छ। ...
थप हेर्नुहोस् हेर्नुहोस कम
उत्पादन-सम्बन्धित प्रश्नहरू? सीधा हाम्रो समर्थन टोली कुरा>
घर / फोन रिकभरी / मोबाइल फोन रिकभरी: कसरी मोबाइल फोन फाइलहरू पुन: प्राप्त गर्न
कार्यालय कागजात मर्मत
निःशुल्क डाटा रिकभरी
म्याक / पीसी